Loharano famoronana sary 6 hisintomana maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Loharano famoronana sary 6 maimaim-poana hisintona amin'ity Jolay ity
Ny asan'ny famolavolana sary dia apetrak'ireo loharanom-pahalalana rehetra ananan'ilay olona manokana amin'ity sehatry ny fahalalana ity ary, ho fanampin'izany, dia azo ampiasaina rehefa manatanteraka ny asany rehetra. Ity karazana loharano ity dia hiankina mazava amin'ny karazana asa hatao, ary koa ny ora, ny toe-javatra ary ny karazana orinasa na mpanjifa iasan'ilay olona. Ny dikany toy izany dia voafaritra toy izao manaraka izao ary izy io dia ilay orinasa farito izay karazana loharano azonao ampiasaina ny mpamorona sary ho an'ny asanao rehetra.
Misy maromaro loharano azo jerena ao amin'ny Internet, izay manompo mandritra ny fotoana aorian'ny asa, izay efa namarananay ny asanay, izay efa vonona ny hatolotra. Atolotray eto Loharano 6 azonao ampiasaina amin'ny volavola, izay azo sintonina maimaim-poana ihany koa, ahafahan'ny matihanina sy ny mpankafy hatokana hanome ny fombafomba ara-dalàna an'ireo tetikasan'izy ireo amin'ny fampisehoana, fomba ary fomban'izy ireo.
1 Amin'io lafiny io dia takatra sy hazavaina toy izao ireto loharano 6 ireto:
1.1 Ilay tanana volo
1.2 Maneso ny famolavolana anao ao anaty kitapo
1.3 Fanesoana DinA4
1.4 Teknolojia faha-90
1.5 Mockup: ny maha-orinasa anao
1.6 Logos miaraka amina toetr'andro
Amin'io lafiny io dia takatra sy hazavaina toy izao ireto loharano 6 ireto:
Ilay tanana volo
Amin'ny ankapobeny, ity loharano ity dia misy manolotra tanan'olombelona, manisy teboka, manetsika tanana hafa, miarahaba olona (mpamaky), misambotra zavatra ... sns. Na dia mety miteraka fahatsapana mangatsiaka aza izany, ny marina dia malaza be izy io ao anatin'ny sanganasa famolavolana maro, izay, hita fa loharanom-pahalalana tena mahazatra sy sariaka ao anatin'ny tontolon'ny famolavolana sary.
Ampidino azy eto
Maneso ny famolavolana anao ao anaty kitapo
Ireo karazana loharanom-pahalalana ireo dia mamaly ny fahafahanao mamaky ny marikao amin'ny vokatra an-tsary, izay, Amin'ity tranga ity, ny mpampiasa dia afaka mamaky ny sary famantarana amin'ny kitapo, mitantana mankasitraka azy amin'ny fomba fijery ara-barotra kokoa, mandinika izany amin'ny vokatra iray izay matetika ampiasaina amin'ny doka amin'ny marika maro.
Ity dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana atolotra indrindra ho an'ireo olona maniry hampivelatra a fampisehoana kanto sy arafitra araka izay azo atao. Ity karazana modely ity dia matetika ampiasaina amin'ny fandaharam-pianarana, na fampisehoana na fanasana amin'ny hetsika iray aza. Amin'ity karazana antontan-taratasy ity dia ho azo atao ny mandahatra ny antontan-taratasy amin'ny fomba matihanina indrindra.
Ity fonosana ity dia misy kisary marobe napetraka tamin'ny taona 90, ho an'ireo tia an'ity fotoana ity izay marika amin'ny firenena maro. Azo ampiasaina io loharano io sanganasa mifandraika amin'ity karazan-tantara ity nanomboka tamin'io fotoana io. Izy io dia mety ho lakilen'ny fandresen-dahatra ny mpanjifa tsy matoky tena momba ny asanao, ary koa ny fomba fomba milamina indrindra hanomezana ny sahan-kevitra amin'ny sanganasa famolavolana.
Mockup: ny maha-orinasa anao
Azonao an-tsaina ve ny logo anao amin'ny orinasa? Raha ny valinteninao dia miankina amin'ny fahafaha-manao an'io karazana asa io amin'ny marikao, io fanesoana io no lakilena ilaina mba hahafahana manao an'io sary famantarana mpamorona io ho zavatra matihanina kokoa ¸ ho an'ireo olona liana manao asa ao anatin'ny toerana fanao ara-dalàna sy arak'asa.
Logos miaraka amina toetr'andro
Amin'ny ankapobeny, misy scenario maro izay mitaky antsika hanolotra arak'asa araka izay azo atao.
Na izany aza, hisy ny scenario hitaky ny mifanohitra amin'izany, izay, ity karazana logo ity dia mety ho lasa maodely nifanaraka bebe kokoa tamin'ny filantsika izay nipoitra avy amin'ny sehatry ny matihanina saingy tsy dia kanto toy ny mahazatra antsika amin'ny fahitana.
Ireto ny sasany amin'ireo loharanom-pahalalana azontsika jerena ao amin'ny tranonkala, ahafahantsika manatanteraka ny asantsika amin'ny fomba mahomby indrindra ary koa manana ny singa rehetra mety ho hitan'ny fampisehoana azontsika atao mba hoentiny hivoaka ny asanay rehetra amin'ny fomba azo ovaina sy azo ekena indrindra ho an'ny karazan-javatra rehetra, zava-dehibe amin'ny fampisehoana ataontsika ny fampisehoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Loharano famoronana sary 6 maimaim-poana hisintona amin'ity Jolay ity
Sariitatra amin'ny Internet: Torohevitra famolavolana sy fampiasana